🍒Ikhasino ye-Fastpay -Ubhaliso, indawo esemthethweni, isiqinisekiso
FastPay Casino >Ukuphononongwa kwenkqubo yobhaliso lwekhasino ye-FastPay
Ukuphononongwa kwenkqubo yobhaliso lwekhasino ye-FastPay
Imigaqo yobhaliso lwekhasino ekwi-Intanethi
Unikelo lwentengiso lwabathengi abatsha
Ukuqinisekiswa kwesazisi kwi-FastPay Casino
Ukuvala kunye"nokuqanda" iakhawunti
Ndilwenza njani ubhejo lwam lokuqala kwi-Fastpay?
I-Casino ekhawulezileyo yeKhasino yiprojekthi yamanye amazwe eyasungulwa ngehlobo lowe-2018. Inika bonke abantu abathanda ukungcakaza ikhathalogu enkulu yemidlalo kuyo yonke into oyithandayo - ukusuka kwimidlalo yetafile yeklasi ukuya kwiindawo ezinqamlezileyo. Kulula kakhulu ukuba ngumthengi wale khasino-ukubhaliswa kwikhasino ye-FastPay akuthathi xesha lide.
, Ngesi sizathu, kuphela ngabantu abangaphezulu kweminyaka eli-18 ngexesha lokubhalisa abanokuba ngabathengi bekhasino.
Umgaqo wesibini obalulekileyo yiakhawunti enye. Iikhasino ezikwi-Intanethi ziyakwalela ukudala ngaphezulu kweakhawunti enye yokungcakaza ngomntu ngamnye. Abahlali bamazwe amaninzi ehlabathini banokuba ngabathengi be-FastPay, ngaphandle kwala mazwe alandelayo:
IPortugal, iGibraltar, iFrance kunye nemimandla yayo yaphesheya;
i-USA, iBulgaria, iJersey, iNetherlands, i-Israel;
I-Lithuania, iSlovakia, i-Great Britain, i-West Indies;
Imidlalo ethile evela kwikhathalogu isenokungafumaneki kumazwe athile.
Ngexesha lenkqubo yobhaliso, umdlali uyavuma ukufunda yonke imigaqo yekhasino ekwi-Intanethi kwaye avumelane nabo. Kuyacetyiswa ukuba ungayityesheli le nkqubo, ulwazi ngemithetho luya kuthintela ukungavisisani okuninzi.
Ukophulwa kwemithetho ye-FastPay kunokubangela ukuvalwa kweakhawunti.
Bonke abasebenzisi ababhalise kwi-FastPay banokuthembela kwibhonasi yokuqala yedipozithi. Elona xabiso liphezulu lomvuzo yi-100 USD/EUR okanye i-865 NOK, i-127 CAD, i-130 AUD, i-138 NZD, i-375 PLN, i-1500 ZAR, i-10650 JPY, i-0.01 BTC, i-1.9 LTC, i-0.256 ETH, i-0.05 BCH, i-44000 DOGE ... Isixa semali yebhonasi ibalwa ngokusekwe kwi-100% yobungakanani bedipozithi.
Ibhonasi iyenziwa isebenze xa i-akhawunti izaliswa kwakhona, ikhowudi yenyuselo ayifuneki. Njengokongeza, umdlali ufumana i-100 yasimahla yokujikeleza koomatshini ekufakwa. Zifakwe ngokulinganayo- i-20 yasimahla yokujikeleza ngaphakathi kwiintsuku ezi-5 ukusukela kumhla wedipozithi.
Ukuguqula iimali zebhonasi zibe yimali yokwenyani, kufuneka ubeke ukubheja kwisixa esiya kuthi siphindaphinde ngama-50 isixa sebhonasi eqokelelweyo.
I-FastPay inebhonasi yesibini yedipozithi. Ihlawuliswa ngohlobo lwe-75% yedipozithi. Le bhonasi iphindwe kabini kunebhonasi yokuqala.
Inkqubo yokudala iakhawunti
Ungabhalisela ikhasino ye-FastPay kwindawo ephambili, okanye kwisipili sayo. Ubhaliso luyafumaneka kwikhompyuter, kwi-smartphone nakwi-tablet.
Ukwenza iakhawunti, cofa indawo ethi"Bhalisa". Ime phezulu kwisiza, ngombala oluhlaza. Ukucofa iqhosha kuzakuvula ifom yobhaliso ngale mihlaba ilandelayo:
igama eligqithisiweyo-kuyacetyiswa ukuba uchaze olona manyano lunzima;
Imali - kufuneka ukhethe enye yeemali ezikhoyo - i-USDT, i-USD, i-EUR, i-DOG, i-BCH, i-LTC, i-ETH, i-BTC, i-ZAR, i-JPY, i-PLN, i-NZD, i-AUD, i-NOK, i-CAD.
Onke amasimi ayadingeka. Umsebenzisi kufuneka akhangele ibhokisi"Ndivumelana nemithetho." Kwinqanaba lobhaliso, ungarhuma kuluhlu lwee-imeyile zentengiso, okanye ungabhalisi kulo. Incwadana yeendaba ibandakanya ukunikezelwa okunomdla, iindaba zekhasino. Ungayisebenzisa kwakhona kwiakhawunti yakho.
Emva kokucofa iqhosha elithi"Bhalisa", indawo yekhasino iya kuthumela ileta enekhonkco kwi-imeyile echaziweyo. Kuyimfuneko ukuba isebenze- umsebenzisi unokucofa kwikhonkco ngokuthe ngqo kwileta, okanye ukope kwaye unamathisele kwibar yedilesi yesikhangeli. Ukuba umyalezo ovela kwi-FastPay awukho kwi-Inbox yakho kwisithuba semizuzu engama-30, kuya kufuneka uvule ifolda engogaxeki, apho umyalezo ubuya kufumaneka ngempazamo.
Ukusebenza kweakhawunti kukuvumela ukuba ungene ngemvume ngegama eligqithisiweyo kunye ne-imeyile. Kwiakhawunti yakho yobuqu, kuya kufuneka uvule iprofayile kwaye ugcwalise ulwazi olungekhoyo malunga nawe. Yonke idatha kufuneka ichaneke. Unokongeza ezinye iimali zeakhawunti kwiakhawunti yakho - ikhasino ayipheleli abathengi bayo kwimali enye.
Abasebenzisi abaqinisekisiweyo kuphela abanokuzisebenzisa ngokupheleleyo zonke iinkonzo zekhasino ezikwi-intanethi. Ukurhoxiswa kwemali kwiakhawunti yokudlala kuvulwa kuphela emva kokuchongwa komntu. I-FastPay inokucela ukuqinisekiswa nangaliphi na ixesha, kodwa kungcono ukuyenza ngokwakho kwakamsinya emva kobhaliso.
I-Casino iqinisekisa ukhuseleko lwedatha yobuqu. Ukuqinisekisa, kufuneka uvule iphepha"Akhawunti" kwiakhawunti yakho kwaye uye kwicandelo"lamaXwebhu". Apha kuya kufuneka ulayishe iskeni okanye ifoto yencwadana yakho yokundwendwela, okanye olunye uxwebhu olunokubonisa ubungqina bakho. Umfanekiso kufuneka ubesemgangathweni olungileyo.
Njengesongezelelo kwipaspoti, unokufuna isitetimenti sebhanki, i-invoyisi yentlawulo yonxibelelwano, njalo njalo. Olu xwebhu kufuneka lube namaqalo okuqala ahambelana nepasipoti. Elona xesha liphezulu lokujonga amaxwebhu athunyelwe ziiyure ezingama-24. Ikhasino linelungelo lokucela amaxwebhu ongezelelweyo, ividiyo okanye umnxeba.
Ukuba unemibuzo malunga nokuchongwa kobuqu, abadlali banokunxibelelana nenkxaso. Isebenza 24/7 kwaye iyafumaneka ngencoko ebukhoma kunye ne-imeyile.
abathengi bekhasino abakwi-Intanethi bakwi-FastPay banelungelo lokucima iakhawunti yabo yokudlala nangaliphi na ixesha. Iakhawunti inokuvalwa ngokunxibelelana neqela lenkxaso.
Ukuba umdlali akangeni kwiakhawunti yakhe yeenyanga ezi-6, engafaki ukubheja kwaye engafaki mali, iakhawunti yakhe imisiwe. Ukuqanda iakhawunti ayisiyiyo ukuvalwa, inokuphinda yenziwe.
Ungabeka ukubheja ekhasino ngokukhawuleza emva kobhaliso. Iimali zifakwa ngephanyazo. Inani elincinci ledipozithi yi0.01 BTC, 14 NZD, 10 EUR/USD, 37 PLN, 13 CAD, 4400 DOGE, 0.2 LTC, 13 AUD, 151 ZAR, 0.05 BCH, 1060 JPY, 0.025 ETH, 87 NOK. Ikhasino ayihlawulisi ikhomishini ngokuzalisa kwakhona, kodwa inokusekwa yinkqubo yentlawulo.
Emva kokuba iimali zifakiwe, kuhlala ukhetha umdlalo ofanelekileyo. I-FastPay ibonelela ngokudlala oomatshini ekufakwa, imidlalo yetafile, yekhasino ebukhoma kunye nabathengisi abaphilayo. Ngaphezulu kwe-1000 yemidlalo iyafumaneka kwindawo. Oomatshini bendawo yokubeka amanqaku banokuvavanywa ukongeza kwimowudi yasimahla. Kukho iindawo zokubeka ezahlukeneyo zokubheja kwi-imali yedatha.
Bonke abathengi abatsha beekhasino ezikwi-intanethi ngokuzenzekelayo baba ngamalungu enkqubo yokunyaniseka. Amanqaku anikezelwa ngokusetyenziswa okusebenzayo kweenkonzo ze-FastPay. Bajonga inqanaba lomdlali kwinkqubo yokunyaniseka. Inqanaba ngalinye linika amalungelo alo. Umzekelo, abadlali abakumgangatho wesibini nangaphezulu wekhasino babonelela isipho sokuzalwa.
Amanqaku aqokelelweyo okanye amanqaku emeko anokutshintshiselana ngemali yokwenyani. Ungatshintshiselana kube kanye ngonyaka- kwiveki yokugqibela kaDisemba.
Ubhaliso kwi-FastPay luvula amathuba amahle kubalandeli boomatshini bokungcakaza neminye imidlalo yokungcakaza. Kulula ukubhalisa kwisiza- kufuneka ugcwalise nje ifom emfutshane. Ikhasino icela isazisi ukuqinisekisa isazisi- le yinkqubo esemgangathweni kuzo zonke iikhasino ezisemthethweni ezikwi-intanethi.